Maxey Tahay Danta Itoobiya Ugu Jirta Maamulka Jubbaland? | Allgalgaduud News	Saturday, May 25th, 2013	Home
Published on February 22, 2013 by galgaduud · 17 Comments
Maqaal: Wax badan ayaa arrinta maamul u sameynta Jubbooyinka lagu aqrinayey ookiyaale qabiile, bal markaan aan u gashanno ookiyaale istiraatiijiyadda dowladaha gobolku ka leeyihiin maamulkaas muranka badani ka taaganyahey.Dowladda Itoobiya waa dowladda kaliya ee laga yaabo wax aysan dowladda soomaaliyeed raalli ka aheyn iney ka meel marin karto dalka Soomaaliya, haddey sidaas gacan uga hesho qeyb ka mid ah bulshada soomaaliyeed.
Ogaal says:	February 22, 2013 at 2:48 pm	Inaad wax walba la Islamic sheego amaa laga qurux badan yahay waa iga talo Iyo waano.
Reply »	Liibaan says:	February 22, 2013 at 3:14 pm	Wadaad yare,
Waxaan ka xumahay waxaan oo been iyo taariikh cusub sameys aa la soo shir tagtay.
Mida hore waa maqaalkaaga inta dambe. Maamulka kumeelgaarka ah waqti weliba laga soo bilaabo qabashadii Kismaayo waxay lahaayeen Dawladu waa dawladeena dhulkana Dawlada marti kuma aha. “Gobolkale oo dawladii dhexe ku amar diiday” baad tiri. Ma dawladaa dadkeedii diidan mise adigaa wax kaa qaldan yihiin saa taariikhda laguma hayo Maamulkaas oo aan ictiraaf u heyn Jamhuuriyada federaalka soomaaliya. Tan kale Dawlada iyadaa is sharaf dishey goortey u tagtay Itoobiya si ey kala hadasho walaalahood soomaaliyeed ee jubooyinka. Arinta Ogaden waa maamul federaal ah haddii kheyraad ka soo baxo cida ugu horeyso ka faaiideysaa waa dad soomaalida ah ee ku nool itoobiya, wixii soo harana waxay la kheybsan federalka itoobiya.
Marka itoobiya soomaali isku direysa waa sheekadii aan ka soo daalnay oo beentii lugaha la’eed xamar laga alifi jiray 21 sano oo burbur ah si minority mooryaan u helaan chance ay ku qeybshaan qabiilada qaar. sababta ugu wacan waa iyagoo aan dan ugu jirin Federal xitaa iska daa 2 gobol iyo wax ka badan oo ey kaligoo kuwadaagaan ma jiraa hal gobol oo ey keligood degaan. Mudug iyo galgaduud labaduba waa lala degaa.
Wadaad yare adiga warkaadu waa batay waa in runta lagugu aamusiyaa ama mooryaan baad wax u qortaa ama waxaad tahay kuwey rartaan ilaa aakhiro.
Reply »	wadani dhab ah says:	February 22, 2013 at 3:31 pm	ogaden 2bo gobol markey meel ku sheegan bay soomaali laxisabtamikaran waxna laga maqlin hebalow maxaa barbara ku geeyey baa layiri markaasu yiri faduul hada ogaden waxaa soomaaliya geeyey waa gardaro xukun maamul talo iyo ciid midna ku malahan intay shisheeye u adegahayaan
Reply »	qoqaani says:	February 22, 2013 at 3:40 pm	ITOOBIYA WAXAY JOOGTAA GOBOLADA DHAXE IYO BAY IYO BAKOOL MAA LAGA HADLO NINKAN QABILKA KA SHEEKENAYO WAAD QALDANTAHAY SOMALINADA WAXAY KU DANBESAA WAA QABIILKA ADD SOO MAGACAAWDAY MARKA NINKA LABAXAY WADANI WAAD QALDANTAHAY,
Reply »	Geeel Qaaad says:	February 22, 2013 at 3:50 pm	OGAADEEN ABSAME deegaankiisa jubooyinka cidna kala ta shan uumahayo soomalidu wanaag baan la daba ordeynay lkn waxey noogu badaleen inay dhabarka naga toogtaan maanta markaa maslaxada degankayga ujeedsaday ayay ida ba gudhubsanayaan shirku waxu furmaya baru subax waxuuna dhamaaayaa 8/3/2013 marka ha is xumeynina kala dhulka kusoo noqda wa nabad
Reply »	aden mareere says:	February 22, 2013 at 3:56 pm	ninka sheektay wadani wan kaxuahay mangaabnimadaada waxaan kuu sheegayaa ogaadeen waa halgamaagi somalai waxay ahaayeen u halgamay ee kudilay sarinleey ilyan , kudiley galkii libioy wuxuuna degen yahay baardheer to raaskamboon. waxaan kuleeyahay baro wadan hana aflagaadeyinin umada aa wax ka,aqoon
Reply »	Sahal says:	February 22, 2013 at 4:29 pm	KKK, Hadaasay ku waalataa shidaal ayaa lala bixi iyo itoobiyaa cadow ah. Adeer dadku haduu daanyeero noqdo anigu daaxuurkaan noqon. Soomaali inay gaal daba orodo oo u khidmayso ayay dooratay marka laga reebo beesha Absame kasoo biloow sayid Maxamed iyo Axmed Guray ayaan xabad ridayay, hada oon qoraalkan gabanka ah qorayana wax Itoobiya xabad ku ridaya Absamaa jira.
Absame xisaabta ayuu dib u rogrogay, waxaana usoo baxday inuusan kaligii Itoobiya la dagaalami karin, maadama soomaalidii u kala dhuumanayso, dhaawaca Ogaadeenkana ku magac raadsadaam. is faham bilow ah oo meel fiican maraya ayaa u dhaxeeya Absame iyo Itoobiya, mar dhowna heshiis buuxa ayaa la saxiixaya, waxii ihaano ahna halka soomaali ka gashaan ka gali.
Waxii hada ka danbeeya xoogayga, xeeshayda, xoolahaygu waxay ku wajahan yahiin Soomaaliya, doorashada soo socota ama ta kasii danbaysana waxaan ku taamayaan inaan kursiga VIlla Somalia ku fariisto, oo halkaa shaarubaha maleegto.
Markay timaado tan Jubbaland adeerayaal waa tareen socda oon shukaanta hayo, labada dowladood ee SAAXIIBADEENA ahina shidaalka ku shubayaane iskaga hor dhaqaaqa yaanu idin jiirine, Dadka reer jubbaland ee gobalka daga xaqooda waa helayaan, mooryaan Muqdisho kasoo dhawaaqayana loo joojin maayo.
Reply »	jooqle cade says:	February 22, 2013 at 5:16 pm	Marka hore ninka maqaalkaan soo qoray waa nin wadani ah oo aqli badan balse jawaabta dhabta ah waaa in Itobiya ay dooneyso in ay Soomaaliya kala qodqodo oo kala qaybisiyo wax kale oo qarsoon ma jiraan bal dib u xasuusta sida ay uga carareen C/laahi yuusuf iyo majeerteen markii muqdisho ay ku birburiyeen 2007kii
Reply »	wadaad yare says:	February 22, 2013 at 5:24 pm	Saaxiibbayaal waan idin salaamey horta dhammaantiin. Aragtida in la is weydaarsadana ma xuma. Kolley waxaan la isku diiddaneyn in dowladuhu aysan aheyn laan qeyr case ay dano leeyihiin. Dantaasi waxey noqon kartaa mid xalaal ah oo labo dowladood dhex marta. Iyo mid xaaraan ah oo inta dowlad loo gacan dhaafo muwaadiniinteeda dan gurracan laga fushado.
In iyadoo dalku dowlad leeyahey oo caalamkii dhammaa aqoonsadey oo ciidammada loo soo geliyey sida la sheegayo in iyada lagu caawinayo dowladdii maamulkii dalkeedi loo gacan dhaafo oo qabaa,il gaar ah la shiriyo oo awood gooniya la siiyo waa arrin khilaafsan xiriirka saaxiibtinnimo ee dowladaha. Danta laga leeyaheyna qof kastoon is indho tireyn wuu arki karaa.
Markey sidaas arrintu u caddahey waa inaan is weydiinno maxey tahey danta gaarkaa oo beesha gaarkaa u fulin karto dowladda Kenya ama Itoobiya oo aysan ka heli karin dowladda Soomaaliyeed?
Reply »	juujuube says:	February 22, 2013 at 5:29 pm	Itoobiya soomaali dan umma heeyso,sababta ay u taageereeyso in deg deg lagu dhiso maamulkan waa 1- in qabiilada dega Jubooyinka iyo Gedo ay galaan dagaalo faraha looga gubtay oo dhiig badan ku daata.
In ay wiiqanto awooda dowladda soomaaliya oo dadka qabiilooyinkaas ka soo jeeda ay uga hor imaadaan dowladda.
Dadku indho ku garaadle yuusan noqon Itoobiya iyo IGAD makala jecla Soomalai waxa ay doonayaana waa uun dantooda inay hirgasho oo uu dhaco dagaal si soomalida isugu mashquulaan.
Reply »	Sharmarke says:	February 22, 2013 at 5:31 pm	Qoraalka maqaalkan waxaan dhihi lahaa,walaal Ethiopia xitaa hadii ay rabto in Somaali kuli ama qaar ay dowladooda ka horkeento waa arin aad u fudud oo la sameen karo isga daa wadan in uu somalida dowladooda ka hor keeni karee xitaa urur ayaa Somalida dowladooda ka hor keeni kara sabatoo ah:
1. Dowlad kasta oo Soomaaliyeed ma taqaan sida dadkeeda loo kasbado ama loo soo jiido isga daa in ay soo jiidaane waxay sameeyaan ficilo lugu kalo fogaado.
Dowladaan hada Xasan Shiikh iyadoo xitaa an raisulwasaare magaacabin ayay shacabka soomaliyeed qaar isga fogaysay. Waxaan umalaynayaa Somaali oo dhan in ay ogtahay safarkii madaxweyne Xasan ee Bay iyo Hiiraan iyo hadaladii uu ka yiri.
2.Madaxweyne Xasan asagoo og in somaali ay kala dhimatay oo kalsoonidii ay dhuntay, waxay ahayd inuu kan markuu booqdo ama asalamu alaikum dhaho ama uu wax ay xaq u leeyihiin u sheego in uu degaamada kalena saas oo kale ugula dhaqmo. EQUAL TREATMENT FOR THE PEOPLE.
3. Madaxtooyada Somaaliya waxaa u maleesa in ay tahay madaxtooyada gobalka Benaadir.
Markaa wadaadyare, Ethiopia xitaa hadii ay Somaali isga horkeeneeso waa arin aad u fudud oo waxaa ku caawinaaya dowlada Somaaliya.
Fiiri hada Ethiopia waxaa dagan shucuub tiro badan oo kala qowmiyado iyo kale diin ah oo ay Somaali ku jirto, waxay isgu dayaysaa in ay si aqli ku jiro dadka u kasbato oo ay u soo jiidato, way ogtahay in markasta xoog uu shaqeeyneen. Somaaliyana dowladeeda ayadoo dadkeed ay isgu af, diin iyo qowmiyad yihiin ayay kasban waysay.
Oo hada Madaxweynaha iyo shacabkiisa waxay ka mareesaa hadalkii aad Beledweyne ka tiri ee ahaa Hiiraan maamulkooda ayaga ha sameestaan jubooyinka anagaa u sameenayna waa tiri iyo ma dhihin.
MARKA WALAAL SOMAALI UMA BAAHNA IN LA ISGA HORKEENO TAAS SOMAALI AYAGAA KU FILAN.
Reply »	ikhyaar says:	February 22, 2013 at 6:26 pm	XAASHAA LILAAHI war inlee taariikgdu been masheegto c/laahi yuusuf waxuu yiri shabeelka itoobiya dabada laguma dhego hadii aad qabsatana lama siidaayo yuusan ku cunine. sayid maxamed dardaarankiisii waxaa ka mid ahaa..
…Nimanyahaw damiinimada waa lagu duloobaaye.
Dadku wuxuu jeclaystaa waxaan duxi karaacayn’e…
Daarood ismaaciil ma oga dawga looqodiye….
Dadaw maqal dabuubtaan ku iri ama dan hawyeelan
Ama dhaha darooryiba jiryaw doxorku yeelkiisa
Nin ragay dardaaran u tahaye doqon ha moogaado
Dawo lagama helo gaal hadaad daawo dhigataane
Waa idin dagayaa kufriga ad u dabacdeene
Dirhaamkuu(doolar) idiin qubahayaad dib u go’aysaane
Marka hore dabkuu din ka dhigin dumar sidii siiye
Marka xigana dabaaqada yuu din dareensiine
Marka xigana dalkuu idin ku oran duunyo dhaafsada’e.
Reply »	yaasin gacamey says:	February 22, 2013 at 6:46 pm	asc walalayaal wadaad yare runtuu sheegey meesha dowladaha dereska baa dan uugu jirtaa taana wa cadahey somali dowlad baa u dhalatey oo xalaal ah ilahey waa mahadiis hadii labadii shariif iyo cabdi wali gaas sedexdii tuug oo somaali iibsatey ilahey naga qabatey ilah baan uuku xamdineynaaa.
Reply »	abdul says:	February 24, 2013 at 11:19 pm	asc/kaaley somalidu waa habaran tahay mid walba qabiil ayaa ka buuxa/nin kan rayi ayuu soo jeediyay/ku raac ama iska daa /sxb eiphia wax dan ah noogu jirto waa cadaawad ayaa naga dhaxesa/
Reply »	abdul says:	February 24, 2013 at 11:23 pm	bare hiiraale ayay wax u tari laheed hadhow meel ku tuurtay denteeda ayay kugu gaareysaa/weyna ku tuureysaa/mid walba way ku sheqaynasaa hadhowna wey xireysaa/sida dabageed oo rer hiran ahaa /habsi ayuu kujiraa/imisa sarakiil ah ayaa xabsi ku jira/waa cadow
Reply »	dablad yare says:	February 25, 2013 at 10:03 pm	Kismaayo ma haddaa ogaadeen la siiyey,mise
Meeshu waa tii aan naqaanay.
Reply »	qorahay says:	February 26, 2013 at 10:36 am	kkkkkkkkkkkkkk dadka ilaahay sameeyay mid ba noo buu uhadlaa goormaa kuugu horeysay ood magaca kis maayo maqasha 2000 kii wixii ka horeemayay maadan aqoonine meel aan biyo iyo baadba lahaynbaad ku dhaga la aydee